Nifamihina izy efa-mianaka niara-maty tototry ny tany • AoRaha
Ratsy ho an’ity ankohonana kely iray monina eny Ambodihady Ambohidrapeto ny alin’ny alarobia 1 janoary lasa teo. Nihotsaka tao amin’ny trano lehibe iray nisy azy ireo ny tamboho niaraka tamin’ny rarivato ka namoizana ain’olona efatra. Namikitra sy namihina ireo vady aman-janany ilay lehilahy, araka ny nambaran’ireo nahita ny zava-niseho taorian’ny voina.
Niara-namoy ny ainy tototry ny tany teny Ambodihady Ambohidrapeto, tamin’ny alin’ny alarobia 1 janoary lasa teo, ny olona efa-mianaka. Nirodana ny tamboho niaraka tamin’ny rarivato ka nihotsaka tamin’ny trano lehibe nisy azy ireo. Nosokirina tao ambany tany ny vatana mangatsiakan’izy mianakavy kely. Voalazan’ireo nahita ny zava-niseho taorian’ny voina fa namikitra sy namihina ny vady aman-janany ilay lehilahy.
Nandritra ny oram-be narahin-kotroka no nisehoan’ity voina mampalahelo ity. Tao anatin’ny segaondra vitsy monja no nisehoan’ny loza. Nindaosin’ny fahafatesana izy efa-mianaka: Randimbison Heriniaina Willy, 19 taona, i Laingotiana Prisca, 20 taona, ary ny zanak’izy ireo roa lahy, Randimbison Bryan, roa taona, sy Randimbison Ibrahim, fito volana. Nieren-doza ny olona sasany niaraka tamin’izy efa-mianaka tao amin’io trano nihotsahan’ ny tany io.
Nirodanan’ny tamboho sy rindrim-bato teo akaikiny ity trano lehibe.
Teo am-pihainoana tantara
Avy ny orana teto an-drenivohitra sy ny manodidina, ny alin’ny alarobia voalohan’ny taona. Tamin’ izany indrindra no nitrangan’ ny loza nihotsahan’ny tamboho sy rarivato teny Ambohidahy Ambohidrapeto. Efa samy namonjy fandriana sy natory ny fianakaviana tao amina trano lehibe iray, taorian’ny resa- dresaka sy tafatafa ary fihainoana tantara nandeha tamin’ny onjam-peo. Natory tao amin’ ny efitra fandraisam-bahiny ny sasany. Nisy ny natory tany ambony rihana. Tao amina efitra iray no nisy ny mpivady sy ny zanak’izy ireo roa lahy.
“Nisy kotroka sy zavatra nitselatra indray mandeha, tokony ho tamin’ny 10 ora sy sasany teo. Nifoha haingana aho sady nanaitra ny vadiko. Nisy vovoka be tao an-trano. Banga ny rindrina tao amin’ny efitra natorianay. Nihotsahan’ ny tany ny trano”, hoy ny fitantaran- dRamilisaonina Zaria, renin’ilay lehilahy namoy ny ainy.
Tao anatin’ny segaondra vitsy monja no nisehoan’ny loza. Nikoropaka ny olona tao an-trano sady niantso vonjy, nony nahita fa rava ny trano. Nojerena haingana ny tao amin’ny efitra natorian’izy efa-mianaka. “Tsy nety nisokatra ny varavaran’ny trano nisy azy efa-mianaka fa voatohan’ny tany. Voavaha ihany izany saingy efa feno tany sy vato be dia be ny tao an’efitra. Vaky ny rindrina. Nitobaka ihany koa ny rano. Voatsindrin’ ny tany sy vato tao izy efa-mianaka. Hita mbola namikitra sy niaro ny vady aman-janany i zokinay”, hoy indray ny fitantaran-dRandimbison Fanomezantsoa Odilon, rahalahin’ilay lehilahy maty.
Natory tamin’ny kidoro teo amin’ny tany izy efa-mianaka. Tandrifin’ny rindrina nirodana ny lohan’izy ireo. Izany no voa voalohany ka tsy afaka nanavotr’aina izy efa-mianaka. Nifampisokirina ny vatana mangatsiakan’ izy efa-mianaka. Ilay raim-pianakaviana no hita voalohany. Nantsoina ny sampana mpamonjy voina saingy efa tafavoakan’ny fokonolona ny razana tamin’ny fotoana nahatongavan’izy ireo teny an-toerana. Naharitra telopolo minitra teo ho eo ny nakana ny razana tototry ny tany.
“Tsy naheno azy efatra niantso vonjy na nihiaka izahay, tamin’io fotoana nisehoan’ny loza io”, hoy ny fianakaviana tao an-trano.
Tsy nino ny fahafatesan’ny zanako aho raha tsy nahita mivantana, hoy Raharinaivo Alexice Aimé.
Ankona tanteraka ny fianakaviana tamin’ity voina tampoka namoizana ain’olona efatra ity. Mipetraka any Ambaniala Itaosy ny fianakavian’ i Laingotiana Prisca, ilay renim-pianakaviana namoy ny ainy. Ora vitsy taorian’ny voina ihany dia nampandrenesina sy nilazana ny ray aman-dreniny. Iretsy farany izay tsy nino raha tsy nahita maso.
“Tonga tao an-trano ny olona, tokony ho tamin’ ny roa ora maraina.Tsy niteny mivantana izy ireo fa nilaza fotsiny hoe tra-doza izy efa-mianaka ka namoy ny ainy. Nitohy ny fanazavana. Nihotsahan’ ny trano, hono, ny zanako. Tsy niandry ela aho fa tonga dia nandeha”, hoy Raharinaivo Alexice Aimé, rain’i Laingotiana Prisca, tamin’alahelo tanteraka. Tsy tanan’ity raim-pianakaviana ny ranomasony tamin’ ny fahitana ny vatana mangatsiaka.
“Tsy mbola nifampiarahaba nahatratra ny taona vaovao tamin’io zanako io aho. Tamin’ny 30 desambra 2019 andro nitsingerenan’ny taona nahaterahany no nihaonanay farany. Efa niomana ny hamangy anay izy mianakavy kely saingy ny fahafatesana no tonga aloha”, hoy ihany Raharinaivo Alexice Aimé.
Ora vitsy nialoha ny nisehoan’ny loza no fotoana mamy niarahana farany tamin-dRandimbison Heriniaina Willy sy ny vady aman-janany ary ny fianakaviana rehetra tao an-trano. Mbola niara-nifaly noho ny fahatrarana ny taona vaovao sy mbola niresadresaka izy mianakavy, tamin’io alina io.
“Tadidiko ireo zanako ireo mbola nisangisangy sy naka vola tamiko. Fifaliana no niarahana nialoha ny nandaozan’ izy ireo anay”, hoy Ramilisaonina Zaria tamin’alahelo tanteraka.
Mbola nokarakaraina sy tsy azo nipetrahana ilay trano ravan’ny tamboho nirodana, ka voatery napetraka tamina trano hafa ny razana.
Ontsa tanteraka Ramilisaonina Zaria, renin’ilay lehilahy namoy ny ainy.
Herisetra nihatra aman’aina :: Maty voadaroka ilay ankizilahy mpianatra
Famonoana zaza tamin’ ny takon-kenatra :: Mpianaka nogadraina tamin’ny fahafatesan’ankizy efa-taona